Mr. nkịtị nkume na Piscine Global Europe 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. nkịtị Rocks na Piscine Global Europe 2018
Merci de nous avoir honorés de votre ọnụnọ.
Anyị ga-achọ na-ekele niile anyị na ndị ahịa na-azụ ahịa mmekọ maka ileta anyị guzo Piscine Global Europe 2018, nnukwu mba ọkachamara ngosi na-egwu mmiri na Wellness ụlọ ọrụ.
The ngosi bụ oké ihe ịga nke ọma, o nyere anyị ohere-egosi na ụwa na Aquark si otutu inverter ọdọ mmiri okpomọkụ nfuli, nakwa na anyị dị ike R & D ike na elu ngwaahịa mma. Anyị enyoba nnọọ ole na ole ahịa ohere, ka ọ dịgodị, anyị nwekwara obi oké mgbanwe ahịa.
Inverter technology na-eduzi ndị ugboro. Na ihu nke ike ọgbọ mpi, Aquark ka na-edu ndú dị otú ahụ na nkà na ụzụ. Ọtụtụ Chinese ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta emepụta abuana ke ngosi, ma Aquak si Mr. nkịtị bụ kasị ọhụrụ na ọtụtụ pụrụ iche okpomọkụ mgbapụta nke niile. Ọ bụ mbụ slab imewe inverter na pụrụ iche ikuku-iyi ọdọ mmiri okpomọkụ mgbapụta na ọdọ mmiri ụlọ ọrụ. A otutu ọkachamara ahịa na-egosi mmasị dị ukwuu. Anyị bụ ndị mpako na anyị na ngwaahịa nwetara n'ụwa nile ude, nke ukwuu anyị sikwuo ike ka obi ike nke R & D.
Innovation mgbe akwụsị. Dị ka a technology innovator, anyị ga na-na àjà ihe imewe maka kacha mma ahịa ahụmahụ. N'itinye ka a Global OEM ibe, anyị na-enwe ike inye Aquark onwe imewe ka ahaziri imewe. N'oge ahụ, anyị nwere na nso Inverter ọdọ mmiri okpomọkụ nfuli maka gị oke. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu ihe banyere anyị otu ma na-amụta ihe bụ ọhụrụ ke Aquark, soro anyị na LinkedIn ,Facebook na Twitter.
Post oge: Nov-27-2018